"Waa Inoo Ciyaarta Kaddib" - Antonio Conte Oo DAGAAL Ku Ballansaday Ever Banega Intii Ay Socotay Ciyaartii Sevilla & Inter Milan - Gool24.Net
“Waa Inoo Ciyaarta Kaddib” – Antonio Conte Oo DAGAAL Ku Ballansaday Ever Banega Intii Ay Socotay Ciyaartii Sevilla & Inter Milan
Tababaraha Inter Milan, Antonio Conte ayaa cadho ku ballansaday xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Sevilla ee Ever Banega oo ay isku dhaceen intii ay socotay ciyaartii xalay ay Sevilla ku qaadday koobka Europa League.
Xiddiga khadka dhexe ee Sevilla ayaa waqti kooban oo aanu ku degin kusoo qaatay Inter Milan laakiin waxa uu dib ugu soo laabtay Sevilla isaga oo xalayna qabsaday khadka dhexe oo uu ka wiiqay cududdii uu Conte isku habaystay ee uu usoo diyaarsaday inuu ku qaado koobka.
Antonio Conte ayaa ku eedeeyey Banega inuu istuuray xilli uu laynka u dhowaa, laakiin ruug-caddaaga reer Argentine ayaa si adag ugu jawaabay, waxaanu wax ka sheegay timaha tababaraha Talyaaniga ah oo uu tilmaamay inuu ka rifi doono.
Conte oo ay ka muuqatay cadho badan ayaa u sheegay Banega inuu sugo inta ay ciyaartu dhamaanayso, diyaarna uu u ahaado inuu wax iska celiyo.
Tababare Antonio Conte oo qaylinaya ayaa yidhi: “Waa inoo ciyaarta kaddib”. Waxa goobta joogay garsoorihii kulanka iyo ciyaartooyo dib usoo celiyey Banega oo isaguna cadhaysnaa.
Antonio Conte oo hore tababare ugu soo noqday Juventus iyo Chelsea waxa uu caan ku yahay khilaafka garoonka agtiisa iyo in ciyaartoyda kooxaha kale uu canaan usoo jeediyo, taas oo uu mararka qaarkood ku darsado inuu garsooreyaasha wax ka sheego oo dusha sare la saaro.
Garsoorihii kulanka dhexdhexaadinayay ayaa kaadh digniin ah siiyey Antonio Conte, waxaanu marar kale u raaciyey digniino.
Sevilla ayaa awood u yeelatay inay ka daba timaaddo Inter Milan oo bilowgii gool rikoodhe ah uu u dhaliyey Romelu Lukaku, waxaana laba gool oo is xigay u dhaliyey Luuk de Jong ka hor intii aanu Diego Godin ciyaarta ka dhigin 2-2.
Ciyaarta oo ay 13 daqiiqadood ka hadhsan yihiin ayay Sevilla heshay goolka guusha waxaana kubbad iska dhaliyey Romelu Lukaku, sidaana waxa Koobka ugu dabbaal-degtay Sevilla oo markii lixaad gacanta ku dhigtay Europa League.